Veintiocho Millas, Limón, Costa Rica
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguIvan A.
Saqala ngokujoyina i-Airbnb ngo-2019 kunye nendlu yosapho lwethu, amagumbi okurenta. Ngenxa yempumelelo, sigqibe ekubeni sikhonze ngcono iindwendwe zethu zexesha elizayo kwaye sakhe iKhabhinethi entsha kraca ngo-2021!
I-Caribbean R&R, kanye ecaleni kwehlathi lendalo, iZilwanyana zasendle ezingaqhelekanga, Ukubukela iintaka kwindawo yabucala yeehektare ezi-5&2 yeehektare Indawo yaseFama apho iibhanana, iiplantain, iiguanabana, iikhokhonathi zivunwa khona. Imilambo ecwengileyo eCristal engaphantsi kweemitha ezingama-500/kwikota yemayile!
UMlambo iMadre de Dios, uMlambo iBarbilla kunye nehlathi liyacetyiswa!
Ifama yethu isecaleni kwendawo yolondolozo lwendalo. Ipropathi igcwele amasimi eziqhamo kunye nemifuno.
Zonke izilwanyana kunye nezinambuzane ezithathwe kwimifanekiso zithathwe kwipropati!
Sine-grill kwindawo yakho, kunye neehamacs kunye nezitulo ezishukumayo! Umnyango kunye nendlela eya kwikhabhinethi izimele ngokupheleleyo kwiindwendwe.
Ekuseni, iinkawu ziya kukunika intsasa elungileyo, emva kwemini amasele adumileyo aluhlaza nabomvu aya kubonakala kwaye ngalo lonke usuku, iintaka, ama-sloth kunye namacilikishe zinokudlula kwaye zithi molo!
Umbuki zindwendwe ngu- Ivan A.
UIvan A. yi-Superhost